आँचललाई विवाहको शुभकामना दिँदै पल शाहले के गरे यस्तो ? – Entertainment Khabar
केही समय अघि अभिनेता पल शाह र अभिनेत्री आँचल शर्माको चर्चा परिचर्चा जताततै थियो । यो जोडीलाई पर्दामा मात्र होइन दर्शकले वास्तविक जीवनमा पनि सदैव सँगै हेर्न चाहेका थिए । तर पर्दाको सबै जोडीले कहाँ जीवन एक अर्कासँगै बिताउँछन् र ? दर्शकको मनले एक थोक खोजे पनि उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन अर्कै हुन्छ । दर्शकले ‘आँप’ जोडीको रूपमा मन पराएका आँचल र पल एकसाथ नदेखिनु को कारण हो आँचलको विवाह । केही समय यता फिल्म इन्डस्ट्रीमा आँचल विवाह बन्धनमा बाँधिने हल्ला चलिरहेको छ र यसलाई उनले पनि स्वीकार गरेकी छिन् ।